शेयर व्यवसायमा भएको गल्तीकाकारण भारतीय धनाढ्य मुकेश अम्बानीलाई ४० करोड जरिवाना - JanaSanchar.com
भारतका धनाढ्य व्यक्ति रिलायन्स इन्डस्ट्रीजका मालिक मुकेश अम्बानीलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। अम्बानी र उनको कम्पनीले सेयर बजारलाई नियमन गर्ने भारतीय सेकुरिटी एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड (सेबी) ले ४० करोड जरिवाना लिएको छ। सेबीले नोभेम्बर २००७ मा तत्कालीन रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड (आरपीएल) को शेयर व्यवसायमा भएको गल्तीका कारण जरिवाना लिएको हो।
कसले धेरै जरिवाना दियो?
यस मामलामा सेबीले रिलायन्स इन्डस्ट्रीजलाई २५ करोड र मुकेश अम्बानीलाई १५ करोड अन्य दुई संस्थालाई जरिवाना लगाएको छ। यती मात्र होइन, सेबीले नवी मुम्बई सेज प्राइवेट लिमिटेडलाई २० करोड र मुम्बई सेज लिमिटेडले १० करोड जरिवाना तिर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
नोभेम्बर २००७ मा सेयरको नगद र फ्युचर क्षेत्रमा सेयर खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित छ। रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेडको सेयरको नगद र खरीदहरू त्रुटिपूर्ण भएको पाइएको छ। यसभन्दा अघि मार्च २००७ मा आरआईएलले आरपीएलमा ४.१ प्रतिशत शेयर बेच्ने निर्णय गर्यो। यस सूचीबद्ध सहायकलाई पछि २००९ मा रद्द गर्‍यो।
सेबीले के भन्यो?
यस सन्दर्भमा मुद्दा सुन्ने सेबीका अधिकारी बीजे दिलीपले आफ्नो ९५ पृष्ठको आदेशमा भनेको छ, ‘धितोको मात्रा वा मूल्यमा कुनै गडबडीले मार्केटमा लगानीकर्ताको विश्वासलाई सँधै चोट पुर्‍याउँछ। यस कारणले गर्दा, तिनीहरू मार्केट हेरफेरमा सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। यसैले सेबीले यस्तो धांधलीमा नजर राख्छ। यस अवस्थामा साधारण लगानीकर्ताहरू फ्युचर्स र विकल्प खण्डमा सम्झौताको पछाडि रहेको इकाई आरआईएल हो भनेर थाहा छैन। यस अवस्थामा, जालसाजी ट्रेडिंगले दुबै नगद र विकल्पहरू क्षेत्रहरूमा आरपीएलको धितोको मूल्यलाई असर गर्‍यो र अन्य लगानीकर्ताको हितमा चोट पुर्‍यायो।’
बीजे दिलीपले भने, ‘मलाई लाग्छ कि यस्ता काममा गल्ति गर्नेसंग कडाईका साथ पेश हुनुपर्दछ ताकि पुँजी बजारमा यस्ता गतिविधिहरू रोक्न सकियोस्।’
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको (२०७७ पुष १८, शनिबार) 2021-01-02 92 Viewed